Xaflad lagu soo bandhigay Waxqabadka Maamulka P/land ee Sannadkii Tagey+Sawiro – SBC
Xaflad lagu soo bandhigay Waxqabadka Maamulka P/land ee Sannadkii Tagey+Sawiro
Xaflad Balaaran oo habeenkii xalay ka dhacday Madaxtooyada Puntland ee Magaalada Boosaaso oo ay ka soo qeybgaleen Masuliyiinta ugu sareysan Puntland Waxgarad,Aqoonyahan,Culimo iyo Dadweyne kale ayaa ahayd mid si weyn loo soo agaasimay.
Xaflada oo ugu horey lagu furay kalmad muxaaro iyo baraarujin iskugu jirta oo uu halkaas ka jeediyay Suldaan C/salaan ayaa waxaa uu si aad ah ugu nuuxnuuxsaday qiimaha Puntland ay u leedahay shacabka.
Suldaanka ayaa xusay in shacabka Puntland aysan u muuqan Qiimaha Dowladnimo iyo deganaasho leeyahay waxaa uu si gaar ah uga hadlay dilal iyo Falal amaanka lidi ku ah oo ka dhacay Magaalooyinka Boosaaso iyo Gaalkacyo isaga oo ku tilmaamay in dadka ficiladaas geysanaya ay doonayaan in Puntland ay dumiyaan.
Dhinaca kale suldaanka ayaa ugu baaqay Maamulka Haatan jira in looga baahan yahay inay dadka la tashadaan u turaan iyo arimo kale.
Xaflada waxaa lagu soo bandhigay ruwaayado iyo heeso wadani ah oo ay soo bandhigeen kooxda waaberi Puntland kuwaasi oo ka turjumaya xaalada haatan jirta ee dhinaca amaanka.
Intaasi ka dib xaflad Sadex sanno ka dib Doorashadii Madaxweyne Faroole ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradka Puintland kuwaasi oo Maamulka waxaa lagu soo dhaweeyay Waxgaradka iyo Isimada Goobta joogay waxaana isimadii ka hadlay ka mid ahaa Ugaas Xasan Ugaas Yaasiin waxaana uu Ugaaska ku nuuxnuuxsaday in Xukuumada hada ay wax qabatay welina wax kale looga fadhiyo.
Masuuliyiinta xaflada ka hadlay oo aad u fara badnaa waxaa ay ku nuuxnuuxsadeen in si aad ah loogu baahan yahay in ka shaqeynta amaanka wax lagala qabto maamulka Haatan haya talada Maamulka Puntland
Xaflada waxaa hadalo kooban oo amaanka iyo waxqabadka Puntland ka soo jeediyay wasiirada Amniga Khaliif Ciise Mudan iyo Wasiirka Arimaha Gudaha ee Puntland C/laahi Axmed Jaamac kuwaasi oo sheegay in horumar dhinacyo badan leh laga gaaray Amaanka iyo Horumarka.
Ugu daneyn xaflada waxaa soo xiray Madaxweynaha Puntland oo qudbad dheer ka jeediyay xaflada xalay lagu qabtay Madaxtooyada Boosaaso oo lagu soo bandhigay waxqabadkii sannadkii tagey ee Mamulka haatan jira waxaana madaxweyna uu si weyn ugu nuuxnuuxsaday amanka iyo wax laga qabtay.
Docda kale waxaa uu madaxweynaha sheegay in meelo farabadan ay waxka qaban donaan oo ay ka mid yihiin deegaanada xeebaha ah ee ka baxsan Wadada laamiga iyo magaalooyinka waaweyn.
Xaflada waxaa ay ku soo dhamaatay jawi degan iyadoo dhamaan ka soo qeybgalayasha dhamaantood ay ahaayeen kuwo farxad ka muuqato
waa wax loo baaha naa in xukuumada puntland ay soo jeediso,barnaamijyada kobcinta dhaqaalaha,modooyinka soo socda.waxaa kalo ay taasi dhiiri galinaysaa,in shacabka ku nool puntland ay hantidooda,geliyaan,mashaariic u dan ah dadka,ku nool puntland,waxaa u rajeynayaa shacbiga reer puntland iyoxukuumaduba,in ay ku dadaalaan,in naba iyo amni buuxa uu ka hirgalo puntland,si loo tiigsado,hotumar wax ku uul ah,oo aan suuroobayn,haddi ay jirto amni daro,guul puntland.
ugu horayn waxaan uhanbal yaynayaa ulshada somaliyeed khasatan kuwa reer puntland marka xiga waa dhab in xukuumada faroole dadaashay lkn maxay soo kordhisay maxayse dib ugadhacday mudane faroole siyaasiyiintii caanka ahayd ee rugcadaaga ahayd waa eryay wuxuuna kadhigay kuwo uu eryo iyo kuwo uu xilkii kaqaday sidaas si lamidah wuxuu isna meesha kasaray kalintii guurtida ama wax garadka ee beelaha dhex dhexadin jirtay mahayno oo wuu eryay dalkii ngo mtuugo ah oo macdantii hdagixii iyo badii gurtayna waa haynaa marka maxaa noo dhimansiyaasadii ku adanayd gobolada sool io sanaagna meesha ayay kabaxday amaanka galkacyo bosso and qardhana waa mid meehsa kamaqan marka mawaxuu kufanayaa wax qabad mise dalkii ayuu kala yaciyay mudana madaxweyne nagufilan intaas ee booska banee haday qiiro dal iyo dad jacayl kugu jirto (ca_q_iil@hotmail.com)
Maansha Allaah Qurux baa ka Muuqatah Meesha ay ku shirayaan iyo Dadkaba.
kadiye cali geele says:
maashaa alaah caadi maaha p/land hawaarto ilaahay nabad iyo bash bash u waariyo walalayaal saxaafadana aad ayaan ugu dhiiri galinayaa shaqada
mohamed abdi aziiz mohamed says:
waa muhiim ah in madaxdu aysoo bandhigaan waxqabadkooda haba yaaraadee waxna usoo jeediyaan bulshada waxaan u arkaa puntland si toos ah waxay ku tilaabsan doona horumar